जीवनमा सर्वोत्तम उपलब्धि कसरि प्राप्त गर्ने ? | Nepali Christians
जीवनमा सर्वोत्तम उपलब्धि कसरि प्राप्त गर्ने ?
August 28, 2015 9:44 am by: Admin Category: Articles A+ / A-
– श्रवन बोम्जन
यो संसारमा यस्तो को छ जो सर्वोत्तम जीवन जिउन चाहँदैन ? जीवनमा सर्वोत्तम उपलब्धि पाउने इच्छा कसलाई छैन ? अर्थात जो कोहिले पनि सर्वोत्तम उपलब्धि पाउन चाहान्छन् । तर पहिले यो जान्नुहोस् कि सर्वोत्तम उपलब्धि के हो ? समस्त सृष्टिमा जो ‘सर्वोत्तम’ छ, त्यसलाई प्राप्त गर्नु नै सर्वोत्तम उपलब्धि हो ।
सर्वोत्तम के हो ? सर्वोत्तम त एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, अरू कोहि छैन । परमेश्वरलाई प्राप्त गर्नुनै जीवनको सर्वोत्तम उपलब्धी हो । फेरी जीवनमा कुनै अरू उपलब्धिको इच्छा, इर्ष्या रहने छैन । यसबाहेक तपाईंले जीवनमा जे पनि प्राप्त गर्नुहुन्छ सबै बेकार हो, हुनेछ ।
यो धन-दौलत, मान-सम्मान आदि कतिदिन रहला ? यो संसार तथा संसारसँग सम्बन्धित कुनै पनि वस्तु तपाईंको होइन, फेरी किन त्यसलाई आफ्नो बनाउने चक्करमा लाग्नुभएको छ ? दोस्रो कुराहरूको त कुरा नै छोडौं, यो शरीर पनि तपाईंको होइन । यो पनि तपाईंले एकदिन छोड्नुपर्छ । यो संसारको कुनै पनि थोक सधै तपाईसँग रहन सक्दैन फेरी किन त्यसको पछाडी भागीरहने ? आखिर भाग्नै पर्छ भने त्यसको पछी भाग्नुहोस् कि फेरी कहिल्यै कुनै कुराको पछाडी भाग्नु नपरोस् ।त्यस कुरालाई प्राप्त गर्ने कोशिश गर्नुहोस् जुन कुरा पाएपछि तपाईंबाट त्यो कुरा कहिल्यै टाढा नहोस् । जुनसुकै तरिकाले होस्, जुनसुकै माध्यमबाट होस्, यो जगतमा जे गर्दा पनि परमेश्वरको भावना भेटोस्, हाम्रो अस्तिस्त्व परमेश्वरमा बनिरहोस् ।हामी परमेश्वर प्रति समर्पित बनि रहौं । यो नै सर्वोच्च स्थिति मानिने छ । महान उपलब्धि मानिनेछ ।
हो हामीले परमेश्वरलाई आफ्नो जीवनमा निम्त्याउँदा र सर्वोच्च उपलब्धिको तक्मालाई शिरोपर गरेर जिउँदा अनेकौ तरिकाले हामी पेलिएका छौं । हेपिएका छौं । असोचनीय आरोप र आलोचनाको शिकार हामी हुनुपरेको छ । डलरमा धर्म परिवर्तन गर्नेहरू भनेर, हाम्रो आत्मविश्वासमा चिथोर्न प्रयास गर्ने गरेका छन् । तर हामी महान उपलब्धिको निम्ति सहौँ ।
हामीले देखेका छौं, कतिजना काम गर्नकै लागि, पैसा कमाउनकै लागि घरदेखि बाहिर जान्छन् तर उनीहरूलाई कुनै अपमान, बेईज्जति हुँदैन । तर सच्चाईको बाटोमा, परमेश्वरको निगाह खोज्दै कुनै परिवार, व्यक्ति परमेश्वरको अनुग्रहमा जिउन चाहान्छ भने मानिसहरूले अपमान-बेइज़्ज़ती डलरमा बिकेको सम्झन्छन् ।
यो समाजले समलिंगीहरूलाई मन्दिरमा फुलादनी सजाएर विवाह गरिदिन्छन्, मानवाधिकारको नाउँमा महिलाहरूलाई पुरुष र पुरुषलाई महिलाको दर्जा दिएर तालि बजाउँछ, उनीहरूकै भाषामा, मानवाधिकारको नाउँमा यो सबै अभ्यास ठिकै मानौं ! तर उनीहरू, अर्थात् कोहि व्यक्ति आफुले चाहेको, स्वीकार गरेको धर्म ‘आस्था’ को बाटोमा हिड्न चाहान्छ भने यहिँ समाजबाट बेइज़्ज़ती-अपमान सहित डलरे, गाई खाने, दलितले मान्ने धर्म जस्ता आरोप र आलोचनाको तक्मा बोकेर बाँच्नु पर्छ ।
अहिले हाम्रो सरकार कतिपय रीतिले हाम्रो आस्थाप्रति निष्ठुर भएको छ । जानी राखौं : के चार पैसा कमाउनकै लागि सरकारले जनतामाथि शोषण गरिरहेको छैन र ? एकातिर नशा-उन्मूलन गर्न भनेर करोडौं खर्च गरिरहेको छ, जाँड, रक्सि चुरोट जन्य: सेवन नगरौं भनेर करोडौंको बिज्ञापन, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरेका छन् तर रक्सीको फैक्ट्रीहरू कहाँबाट आउँछ ? लाईसेन्स कहाँबाट पाउँछ ? एकातिर मध्यपान सेवन गरेर गाडी नचलाऊ भनेर बिज्ञापन दिइरहेको हुन्छ, अर्कोतिर चियाको दोकानलाई पनि रक्सि बेच्ने लाईसेन्स दिइरहेको हुन्छ । कसको लागि हो ? तपाईंहरूले बचाउ अभियान गर्दै विष उत्पादन गर्न हुने, हामीले मृत्युको संघार तोडेर नयाँ जीवन आशा लिएर बाँच्न नपाउने ?
मित्रहरू हाम्रो बारेमा आलोचना गर्ने र हामीप्रति कठोर स्वभाव देखाउने राज्यलाई छोडिदिनुहोस्। हामी हाम्रो विश्वासको सिस्टममा स्थिर रहन आजको आलोचनालाई सहौँ, भोलिको आदरलाई पर्खौं ।
परमेश्वरको सृष्टि जति सिस्टेमेटिक छ, त्यति नै उहाँको संरचना जटिल छ । यसैले गहिराईबाट उहाँलाई नचिन्दा जति अविश्वासको अप्ठ्यारो बाटो देख्छौं, उहाँलाई चिनेपछि, अविश्वासलाई चिरेर, त्यो भन्दा बढी सहज र आनन्दको यात्र सूरु गर्न सक्ने छौं ।यहि सत्यताको आत्माले मात्र जीवनको सर्वोत्तम उपलब्धीमा पुर्याउनेछ ।
त्यसैले परमेश्वरलाई भेटिसकेपछी, उहाँकै अनुसार समर्पित जीवन जिउनुपर्दछ । कुनै पदलाई पाएर मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसलाई निर्वाह गर्नुपनि सक्नुपर्दछ । जति ठुलो पद हुँदछ, त्यति नै ठुलो जिम्मेवारी पनि हुन्छ । यसकरण परमेश्वरको मार्गमा धेरै कठिनाई, परिक्षा र संघर्षबाट भएर निस्कनुपर्दछ । हिम्मत हार्नुहुँदैन । हामीले जति ठुलो चुनौतीलाई पार गर्छौं, त्यति नै ठुलो पद प्राप्त गर्छौं । यसकारण परमेश्वरको सम्पर्कमा रहेर जिउन सिक्नेले मात्र संसारको, अनन्तको सर्वोत्तम उपलब्धि प्राप्त गर्नेछ । हामी परमेश्वर प्रति समर्पित बनि रहौं ।यो नै सर्वोच्च स्थिति मानिने छ । माहान उपलब्धि मानिनेछ। आमेन !
जीवनमा सर्वोत्तम उपलब्धि कसरि प्राप्त गर्ने ? Reviewed by Admin on Aug 28 . - श्रवन बोम्जन यो संसारमा यस्तो को छ जो सर्वोत्तम जीवन जिउन चाहँदैन ? जीवनमा सर्वोत्तम उपलब्धि पाउने इच्छा कसलाई छैन ? अर्थात जो कोहिले पनि - श्रवन बोम्जन यो संसारमा यस्तो को छ जो सर्वोत्तम जीवन जिउन चाहँदैन ? जीवनमा सर्वोत्तम उपलब्धि पाउने इच्छा कसलाई छैन ? अर्थात जो कोहिले पनि Rating: 0
धाँदोमा उभिदिने मानिसको खाँचो...महान ईश्वर !